NYI LYNN SECK 18+ DEN: Resources for Delta Region
Resources for Delta Region
ဧရာဝတီတိုင်းမှာ ခရိုင် (District) ငါးခုရှိတယ်။ မြို့နယ် (Township) နှစ်ဆယ့်ခြောက်ခု ရှိတယ်။ မြို့နယ်ခွဲ (Sub Township) ခုနစ်ခု ရှိတယ်။ မြို့ငယ် (Town) သုံးဆယ့်လေးခု ရှိတယ်။ ကျေးရွာစု (Village Tract) တစ်ထောင့်ကိုးရာ တစ်ဆယ့်နှစ်ခု ရှိတယ်။ ရွာ (Village) တစ်သောင်းတစ်ထောင့်ခုနစ်ရာ့တစ်ရွာ ရှိပါတယ်။ အောက်က အချက်အလက် တွေကတော့ လပွတဿတာ မြို့နယ်ဘက်မှာ ကယ်ဆယ်ရေး သွားမယ့် သူတွေ အတွက် အသုံးဝင်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ အချက်အလက်တွေကို စုဆောင်းမယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ အခှေါအဝှေါ တွေကိုလည်း သိထားရပါမယ်။
ဧရာဝတီတိုင်း (Ayeyarwady Division) အတွင်းရှိ ခရိုင်များ (Districts)
မြောင်းမြခရိုင် (Myaungmya District) အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ (Townships)
လပွတဿတာမြို့နယ် အတွင်းရှိ မြို့နယ်ခွဲများ
လပွတဿတာမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်များ (Wards)
အမှတ် ၁ ရပ်ကွက် No.1 Ward
အမှတ် ၂ ရပ်ကွက် No.2 Ward
အမှတ် ၃ ရပ်ကွက် No.3 Ward
အမှတ် ၄ ရပ်ကွက် No.4 Ward
အမှတ် ၅ ရပ်ကွက် No.5 Ward
အမှတ် ၆ ရပ်ကွက် No.6 Ward
အမှတ် ၇ ရပ်ကွက် No.7 Ward
အမှတ် ၈ ရပ်ကွက် No.8 Ward
အမှတ် ၉ ရပ်ကွက် No.9 Ward
လပွတဿတာမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာစုများ (Village Tracts)
လပွတဿတာမြို့နယ် ပြင်စလူမြို့နယ်ခွဲ အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်များ
Download Detail Villages Information here [Link]
See Online Here [Google Doc]
နာဂစ်နှင့် ပတ်သတ်သော မြေပုံများ အချက်အလက်များ
Nargis Maps and Resources
HIC တွင် Interactive Map နှင့် Map Catalog ဆိုပြီး နှစ်မျိုး တွေ့ရသည်။ မြန်မာပြည် ကွန်နက်ရှင် အနေအထားအရ Map Catalog က ပိုအဆင်ပြေသည်။ ယင်းအထဲတွင် UNOSAT မှမြေပုံများ၊ MIMU မှမြေပုံများ၊ USAID မှမြေပုံများ၊ ITHACA မှမြေပုံများ၊ DLR မှမြေပုံများ စသည်တို့ကို တွေ့ရသည်။
ယူနိုဆတ် မြေပုံများမှာ တိကျသလို အလွန်အသုံးဝင်သည်။ မုန်တိုင်းဒဏ် ခံရသော ဒေသများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ယနေ့အထိ မြေပုံ စုစုပေါင်း ၄၄ပုံ ရှိသည်။ မြေပုံများကို High Resolution သို့မဟုတ် Low Resolution ကို PDF အနေဖြင့် ရယူနိုင်သည်။
မြေပုံ အစုံလင်ဆုံး ဝဘ်ဆိုဒ် တစ်ခု ဖြစ်သည်။ UNOSAT, USAID, NY Times, MIMU, FAO, WHO, DLR စသည့် နေရာအသီးသီးမှ မြေပုံများကို ရယူနိုင်သည်။
မြေပုံ အရည်အသွေး သိပ်မကောင်းသှောလည်း သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များမှာ အလွန်အသုံးဝင်သည်။
အီးမေးလ်ဖြင့် အကောင့်တစ်ခု ဖွင့်မှသာ မြေပုံများကို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ယူနိုင်သည်။
အဆိုပါ နေရာများတွင် မြေပုံများသာမက ဆိုင်ကလုန်းဒဏ် ခံခဲ့ရသော ဒေသများနှင့် ပတ်သတ်သည့် သတင်း အချက်အလက်များကိုပါ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရရှိနိုင်သည်။
Posted by NLS at 6/07/2008 01:46:00 PM
Labels: Information, Myanmar, Nargis, PDF, Resource
No response to “Resources for Delta Region”
Search Engine Crawlers as Proxy
To U.S. Army: Asian Studies Detachment
HMY's July 25
Kyausu Village 2
Kyaung Su Village 1
15 June HMY
Kokko's Budget Huts
The Children in Nargis Victims
Donation At Kokko Village
Mail To Blogger Testing
Handy Myanmar Youth အဖွဲ့သားများ
Myanmar ISP! What's your Ethic?
Moegyo Humanitarian Foundation
Our Experiences at Labutta
Donation and Resettlement Update